Barlamaanka Germalka oo Ansixiyay Sharciyo Cusub oo looga hortagayo Corona
HomeWararka CaalamkaBarlamaanka Germalka oo Ansixiyay Sharciyo Cusub oo looga hortagayo Corona
November 19, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Baarlamaanka Jarmalka, “Bundestag” ayaa ansixiyay maanta oo Khamiis ah (Noofambar 18, 2021) sharciyada cusub ee looga hortagayo faafitaanka fayraska cusub ee Corona, kaas oo ay qorsheeyeen dhinacyo kamid ah Xisbiyada wadanka (Traffic light) , kaas oo hadda wada xaajoodyo lagu dhisayo dawladda federaalka ee Jarmalka.
Tallaabooyinkan waxaa ka mid ah xeerka “G3”, kaas oo dhigaya in kaliya kuwa makhaayad ku lahaa, kuwa bogsaday, ama kuwa leh natiijada baaritaanka corona ee feecan loo oggol yahay inay galaan goobaha shaqada, tusaale ahaan, ama isticmaalaan gaadiid.
Guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Jarmalka, Aydan Ozoguz, ayaa ku dhawaaqay in 398 mudane ay maanta u codeeyeen in la meel mariyo xeerarkan, halka 254 mudane ay ka soo horjeesteen, waxaana ka aamusay 36 mudane.
Waxaa xusid mudan in xeerarkan ay tahay in marka hore ay ansixiyaan golaha Bundesrat ka hor inta aysan dhaqan gelin. Golaha Dawladuhu kama hor iman xeerarkii hore ee Baarlamaanku ansixiyey ee lagaga hortagayo masiibada.
Waxaa xusid mudan in isbahaysiga loogu yeero “Traffic light” uu ka mid yahay xisbiga Sooshal dimuqraadiga, oo ku guuleystay aqlabiyadda doorashooyinkii baarlamaanka ee ugu dambeeyay, Xisbiga Dimuqraadiga Xorta ah iyo Xisbiga Miljöpartiet.